Dadka deggan New Orleans ayaa lagu amray inay ka guuraan maaddaama duufaanta Ida ay soo socoto
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Badbaadada Safarka & Xaaladaha Degdega ah » Dadka deggan New Orleans ayaa lagu amray inay ka guuraan maaddaama duufaanta Ida ay soo socoto
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Duqa New Orleans wuxuu ku baaqayaa in si khasab ah loo daadgureeyo meelaha ka baxsan nidaamka levee, oo ay ku jiraan Lake Catherine, Irish Bayou, & Venetian Isles.
New Orleans waxay filaysaa inay saamayn weyn ku yeelan doonto Duufaanta Ida.
Duufaanta kulaylaha ayaa hadda lagu tilmaamay inay tahay dabaylaha Qaybta 1.
Saadaasha dheeraadka ah ayaa sheegtay in Ida ay isu beddeli karto duufaan weyn oo ah Qaybta 3aad.
Iyada oo New Orleans ay u diyaargaroobeyso duufaanta Ida ee duqa, duqa magaaladu wuxuu soo saaray oo amar ku bixinayaa dhammaan dadka ku nool meel ka baxsan nidaamka levee -ka magaalada.
"Hadda waa waqtigii la bilaabi lahaa," New Orleans Duqa magaalada LaToya Cantrell ayaa ku sheegay shir jaraa'id Jimcihii iyada oo ku boorineysa dadka deggan New Orleans inay xirxiraan sahayda oo ay baxaan kahor inta aysan duufaantu dhicin.
Duqa New Orleans LaToya Cantrell
Waxay si gaar ah u amartay qof kasta oo ku nool meel ka baxsan nidaamka levee -ka oo ka ilaaliya aagga daadadka inay u guuraan meelo ammaan ah, waxayna kula talisay kuwa gudaha ku jira inay sidoo kale ka fiirsadaan bixitaanka.
Kuwa ku jira levee -ka ayaa sidoo kale ka bixi kara rabitaankooda, ayuu yiri Cantrell.
The Adeegga Cimilada Qaranka ee Mareykanka ayaa Jimcihii sheegay in duufaanta kulaylaha, oo ku dhow inay gaarto Cuba, hadda loo aqoonsaday inay tahay duufaanta Nooca 1, iyadoo dabaylaheedu gaarayaan xawaare dhan 120 kiiloomitir saacaddii. Dowladda Cuba ayaa durba soo saartay digniin duufaan ah oo ku wajahan gobollada galbeed ee qaranka.
Saadaasha dheeraadka ah ayaa sheegtay in Ida ay isu beddeli karto duufaan weyn oo ah Qaybta 3 oo leh dabeylo ilaa 193 kiilomitir saacaddii marka ay gaarto xeebaha Mareykanka. Wadada saadaasha waxay toos ugu jihaysatay New Orleans. Ma fiicna, ”ayuu yiri Jim Kossin, oo ah saynisyahan sare oo ka tirsan Adeegga Cimilada.
Guddoomiyaha gobolka Louisiana John Bel Edwards ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo gobolka khamiistii la filayay in nidaamka cimiladu uu dhulka soo gaaro dhammaadka toddobaadkan.
"Nasiib darrose, dhammaan xeebaha Louisiana waxay hadda ku jiraan koonnadii saadaasha," ayuu yiri Edwards, isagoo raaciyay "fiidka Sabtida, qof walba waa inuu joogaa meesha uu damacsan yahay inuu duufaanta ka baxo."
Duufaanta Ida ayaa si aad ah u garaaci karta New Orleans isla taariikhdii duufaantii ba’nayd ee Katrina ku dhufatay 16 sano ka hor - Ogosto 29.
Dabayaaqadii 2005, Katrina waxay dishay ilaa 1,800 oo qof markii ay ka kacday aag ku fidsan xeebta dhexe ee Louisiana ilaa agagaarka gobolka Mississippi-Alabama. Waxay sidoo kale sababtay daadad masiibo ah oo ka dhacay New Orleans, iyada oo qiyaastii 80% magaalada ay biyo ku jiraan.